Ao anatin’ny andiany faharoa amin’ny COVID-19, miantso fanampiana iraisampirenena i Nepal · Global Voices teny Malagasy
Tsy ampy fandriana, fanafody ary rivotra ny hôpitaly ao Nepal
Voadika ny 18 Mey 2021 8:19 GMT
Kodiaram-bavaka eo amin'ny tempoly iray tranainy ao Gokarneshwor, Nepal. Sary an'i Bishal Sapkota. Nampiasàna ny Lisansa Pexels.
Hita ho tena mandravarava ilay onja faharoa amin'ny coronavirus ao Nepal, nanosika ilay firenena hiantso vonjy amin'ny sehatra iraisampirenena satria milofika noho ny tsindry mahazo azy ireo fotodrafitrasa ara-pahasalamana ao aminy. Ny Talata 11 May, voarakitra tao amin'ity firenena aziatika ity ny taha avo indrindran'ny olona tratry ny valanaretina, tranga 9.317, ary taham-pahafatesana ambony indrindra nisy tao aminy, 225 tao anatin'ny 24 ora farany.
Mibitsika ilay mpanao gazety, Tarun Timalsina hoe:
Nihoaran'i Nepal i India ankehitriny amin'ny isan'ny maty isaky ny mponina. Miangavy, ampio ilay firenena tratry ny krizy: pic.twitter.com/8WmPDLIzQl
— Tarun Timalsina (@timalsinatarun) 13 May 2021
Hipoka olona ireo hôpitaly ao Nepal ary tototra marary tratry ny tranga COVID-19 manahirana ireo sampana mpanao vonjy aina (ICU). Koa satria ireo hôpitaly tsy ampy rivotra sy fanafody intsony, misy ireo marary averina mody.
Subhash Ghimire, lehben'ny famoahandahatsoratra ao amin'ny Repoblikan'i Nepal nibitsika hoe:
Ny tsy fahafaha-manoatra tsapanao rehefa tsy misy azonao atao ho an'ireo namana sy fianakavianao izay miantso anao mba hitondra ICU, rivotra (oksizena) ary fanafody! Tena ambony ambany tanteraka. #COVID19 #crisis #Nepal
— Subhash Ghimire (@subhash580) 11 May 2021
Nibitsika i Ujwal Dhakal mpisehatra matihanina amin'ny informatika:
Nandohalika ny rafitry ny hôpitaly ao Nepal! Marobe amin'izy ireny no tsy manana oksizena, fandriana & fanafody sy fitaovana tena ilaina #MijanonaAnTrano
— ujwal dhakal (@areyoubumfuzzle) 13 May 2021
Nanomboka ny 29 Aprily, mikatona tanteraka i Nepal, nitarina ho hatramin'ny 27 May. Kanefa, raha natsahatra ireo sidina anatiny sy iraisampirenena, mahazendana fa notazonin'i Nepal ihany ny fanohizana ny sidina Kathmandu-Delhi, na betsaka aza ny loza mitatao. India koa mbola mitolona mafy manao izay hifehezana ilay valanaretina, miaraka amin'ilay karazany indiàna amin'io viriosy io hoe manana fahafahana miparitaka haingana “toy ny doro tanety” ka miteraka ahiahy any amin'ny firenena marobe.
Fanapariahana ny vaksiny ao Nepal
Amin'ny resaka fanaparitahana ny vaksiny, tsara fanombohana i Nepal. Tamin'ny Janoary, ny firenena dia nahazo fatram-baksiny miisa iray tapitrisa amin'ny vaksiny Covishield avy any India ho toy ny fanomezana ary nividy fatra iray tapitrisa fanampiny, iray volana taorian'izay. Ny Covishield, izay voakarin'ny Serum Institute ao India, dia ny Oxford University sy ny AstraZeneca no niketrika sy nahita azy.
Tamin'ny Martsa, nahazo fatra 348.000 amin'ny Covishield ihany koa i Nepal, izy naharakotra ny 20% eo ho eo amin'ny mponina ao Nepal, tao anatin'ilay fandaharanasa COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) nampanantena ny hanome maimaimpoana fatra 13 tapitrisa.
Vantany vao azo noraisina ireo tahirim-baksiny ireo, natomboka tamin'ny Janoary ny andiany voalohany tamin'ny fanaovana vaksiny, ezaka niarahan'ny governemanta sy ny tsy miankina. Nitohy hatramin'ny 5 Martsa ny fanaovana vaksiny, 438.000 ireo olona nahazo ilay fatra voalohany ary 370.000 no afaka nahazo ilay fatra faharoa tamin'ny vaksiny Covishield avy eo. Ny 7 Martsa ny andiany faharoa no nanomboka ho an'ireo olompirenena mihoatra ny 55 taona ary nahazo valiny miabo avy amin'ny olona satria niisa 1,3 tapitrisa no nandray ny fatra voalohany tamin'ny vaksiny Covishield.
Kanefa, noho i India mbola mitolona amin'ny COVID-19 ary nandràra ny fanondranana vaksiny, niato ireo ezaka fanaovana vaksiny tao Nepal. Tsy tonga mihitsy ny fatra 1 tapitrisa amin'ny vaksiny Covishield nafàrana ary tokony ho tonga tamin'ny Aprily, ary toa tsy mbola ho ato ho ato no hahazoan'i Nepal an'izany.
Nampitomboin'i Shina ihany koa ny fanohanany mba hanomezana vaksiny an'i Nepal. Tamin'ny Martsa, nandefa fatra 800,000 tamin'ny vaksiny Vero Cell novokarin'ny Beijing Institute of Biological Products Co. Ltd, tamin'ny alàlan'ny Sinopharm i Shina. Ny 7 Aprily no nanomboka ny fanaovana vaksiny Vero Cell ho an'ireo ao anatin'ny sokajin-taona 18-59 izay natsahatra vonjimaika tamin'ny 29 Aprily noho ny fihibohana. Hatreto, olona 289.000 no efa nahazo ny fatra voalohany tamin'ny vaksiny Vero Cell ary manantena ny hahazo ny fatra faharoa manomboka ny 16 May 2021. Mbola tsy hay hoe rahoviana no hatao vaksiny ny vahoaka ambiny.
Niteraka fanakianana ilay fanehoankevitry ny PM hoe “Voafehy”
Na dia mamono olona an-jatony maro isanandro aza ilay ‘variant’ vaovao ary ny rafitra ara-pahasalamana efa trotraka sahady sy efa miha-tsy ampy ireo fitaovana ampiasain'ny fanjakana sy ny tsy miankina, dia mbola fanambaràna manome toky ihany no navoakan'ireo manampahefana, niteraka hatezeran'ny vahoaka.
Tao anatin'ny antsafa iray niarahany tamin'ny CNN tany am-piandohan'ny volana May, nilaza ny Praiminisitra KP Oli fa voafehy ny toedraharaha misy ankehitriny ao Nepal.
Mpiasam-panjakana taloha i Krishna Gyawali, nibitsika hoe:
Hetsika iray hifehezana ny fahavoazana. Tara loatra, kely loatra.
Tokony navoaka talohan'ny antsafan'ny CNN.
Fa aleo tara toy izay tsy misy!https://t.co/4xhf8ZGxoB
— Krishna Gyawali (@ruru_krishna) 10 May 2021
Mandritra izany fotoana izany, nibitsika i Yub Raj Sedhai mpisehatra matihanina amin'ny fitsaboana:
Maharikoriko ny mahita ny praiminisitra toa manampina maso amin'ny krizin'ny maha-olona. Voatery manempotra ny tenany fotsiny izao ny olona noho ny tsy fisian'ny oksizena. Tsy maharaka ny fitaovana hitsaboana, ny fotodrafitrasa ary ny mpiasa.https://t.co/WAEqHjFGfs via @YouTube
— Yub Raj Sedhai, MD (@YubSedhai) 10 May 2021
Andro maro taty aoriana, nahitsin'ny PM Oli ilay fanambaràny, tamin'ny alàlan'ny matoan-dahatsoratry ny Gazetiboky Guardian niantsoany ny vondrom-piarahamonina iraisampirenana hanampy amin'ny famongorana ny krizin'ny COVID-19 ao Nepal.
Marobe iroe Nepaley nanomboka hetsika ho fanampiana ireo tena sahirana. Ny tanora sy ireo mpiasan'ny fahasalamàna, eny fa na ireo any ampitan-dranomasina aza, dia nanolotra na namatsy vola hahazoana tolotra maimaimpoana ho an'ireo marary mijanona any an-tokantranony, manome sakafo ho an'ireo tsy manana hialofana, ary hatramin'ny fanomezana vaovao / torohay momba ny COVID. Ohatra iray amin'izany ny vondrona Nepal Covid-19 Support Facebook, izay natombok'ireo mpikatroka vitsivitsy, ka isan'ireny ireo matihanina amin'ny asa fitsaboana. Manana fampahalalàna / torohay avy eny ifotony ilay vondrona, indrindra fa momba ireo hôpitaly, fiara mpitatitra marary, ireo mararin'ny COVID-19 izay mandray fepetra maniboka ny tenany, ary hatramin'ny famaliana ny fangatahan'ireo matihanina amin'ny fitsaboana nefa tsy itakiana sandany na kely aza. Namoaka ihany koa izy io boky iray ahitàna ireo tolotra momba ny COVID-19 izay manome torohay tena manampy ireo marary sy ny fianakaviany tra-pahasahiranana, tsy itakiana sandany.
Olona mihoatra ny 22.000 koa no nanasonia fanangonantsonia iray mangataka an'i Etazonia mba hanome an'i Nepal ampaham-baksiny amin'ilay 60 tapitrisa nolazain‘i Washington DC fa hozarainy amina firenena maro hafa. Miezaka ihany koa ireo Nepaley any amin'ny firenena hafa ny hifandray amin'ireo governemanta any amin'ny firenena ipetrahan-dry zareo mba hangataka fanampiana ho an'i Nepal, raha ny Fikambanan'ireo Nepaley tsy mponina raikitra ao Oman kosa nandefa tavoahangin-drivotra oksizeana niisa 600 ho any Nepal.
Nidonan'ny toejavatra mandravarava malaky, resaky ny vahoaka izao ireo olana toy ny tsy fahombiazan'ny governemanta, hatramin'ny fomba firoson'ny vondrona iraisampirenena mba hitsinjara tsy mitanila an'ireo vaksiny COVID-19, indrindra fa any amin'ireo firenena andalam-pandrosoana toa an'i Nepal, izay mitolona mba hiantohana ny fahazoana ireo vaksiny marobe ilaina, raha ireo firenena efa mandroso kosa efa nahavory vaksiny maro mihoatra lavitra noho izay ilain-dry zareo.
Sara Beysolow Nyanti, mpandrindra maharitry ny Firenena Mikambana ao Nepal nibitsika hoe:
Tsy mbola vitan'i Nepal ny niantoka ny hahazoana vaksiny, na dia ny ho an'ireo 20% amin'ny tokony hatao vaksiny fotsiny aza. Tokony ho laharam-pahamehana faratampony i #Nepal . Miantso ireo firenena izay mba afaka manilaka vaksiny aho handefa azy ireny avy hatrany ho any Nepal. https://t.co/AHD2zUc0Eu@UN_Nepal @WHONepal @unicef_nepal
— Sara Beysolow Nyanti (@NyantiSara) 12 May 2021